Wararka caalamka waxaa ugu waa weyn Mareykanka oo sheegaya in aanu aqoonsan doonin golaha ay dhistaan mucaaradka Qadaafi, Asker Mareykan ah oo la laayey & Warar kale.
Dowlada Baxreen Oo xukun Dil Ah ku riday Afar Kamid Ah Dadka banaanbaxyda ka Waday dalkaasi.
Maxkamada Miliratiga dalka baxreen ayaa Waxaa Ay Ku Dhawaaqday maanta xukuno Isgu jira Dil Iyo xabsi daa’n Oo Ay Ku riday Ilaa Iyo 7 qof Oo Ka Mid Aha dadkii bananbaxyada Ka Waday Dalka Baxreen.
7 qof Ee la Xukumay Ayaa Afar kamid Ah waxa lagu Xukumay Dil Toogasha ah,Halka Sedexda kalema lagu Riday Xukun Xabsi daa’m Ah ,Dowlada baxreen Ayaa Dhalinyarda ay Maanta xkuknka ay Ku riday waxaa ay Ku Eedaysa In Ay Dileen labo Kamid ah Ciidamada Booliska dowlada In Itii Uu Socday bananbaxada dowlada loga Soo Horjeeday Todabaadkii Aynu Soo Dhaafnay.
Laakiin Qareenada U doodayay Dhalinyaradaas la xukumay Ayaa Guud Ahaanba Beeniyay Eedaymaha ay Dowlada U Soo Jeedisay ,waxaana Ay warbaahinta u Sheegeen In Xukunka Uu San U Dhicin Si cadaalad Ah.
Aritaasi Ayaa waxaa ay Dhalisay Xiisad balaran,Waxaana jira Boqlaal dadweyne Ah Oo talaabada ay Ku Dhaqaaday Dowlada Oo wadooyinka Socod ku Maraya kuwaasi oo Ku baqaaya in Laga Noqdo Go’aankaasi
Mareykanka oo sheegay in aysan weli aqoonsanin Golaha ay Banqazi ka dhisteen Mucaaradka.
Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in ay xilli hore ku qanacday in hoggaamiyayaasha Libya ay yihiin madaxda golaha Qaranka KMG ee Mucaaradka, ayna istaahilaan taageerada Mareykanka.
Balse Safiirka Mareykanka u fadhiya dalka Libya Jin Kretiz oo saxaafadda la hadlayay ayaa sheegay in xukuumadda Mareykanka ay weli daraaseeneyso aqoonsashada golaha Mucaraadka.
Kooxda ka soctay Q.M ee xaqiiqo raadinta aheyd ayaa sheegtay in ay jiraan tacadiyo ka dhan ah xuquuqul insaanka oo ka dhacay Libya balse ma aysan cdeyn cidda geestay, Xukuumadda Libyana xilli sii horeysay ayay sheegtay in ay la shaqeyn doonto kooxdaas.
Madaxa baaritaanada Sharif Basyuuni ayaa sheegay in ay jiran waxyabo badan oo mudan in wax leyska weydiiyo oo ay kamid tahay duqeynta aan loo meel dayan ee ay ku La’anayaan shacabka, jirdilka, isticmalka ciidan calooshood u shaqeystayaal ah iyo xariga loo geystay dhowr Saxafi.
Dhanka kale magaalada Azantan oo kamid ah magaalooyinkii ugu horeeyay oo ay mucaaradka qabsadaan ayaa la sheegay in Ciidamada Qadafi ay duqeeyeen, duqeyntaas ayaa waxaa ku dhaawacmay 3 qof qeyb ka mid ah Cusbital ku yaalo magaaladaas iyo guryana wey bur bureen sida ay sheegeen Laamaha Caafimaadka ee magaaladaas.
Magaalada Misratah ee galbeedka Libya-na weli waxa ka socda dagaalka u dhexeeyua Mucaaradka iyo Xukuumadda qeybo kamid ah ayaa waxaa gacanta ku dhigay xukuumadda Libya, dowladaha isbaheystayna waxey duqeyn ka fuliyeen qeybo kala duwan oo ka mid ah dalkaas Libya.
Ciidamo Mareykanka oo lagu dilay Airpor-ka Kapul.
Afhayeen u hadlay wazaaradda gaashaan dhigga ee Mareykanka Bentagon-ka ayaa sheegay in 9 ka tirsan ciidamada Mareykanka lagu dilay airpor-ka magaalada Kapul ee dalka Afghanistan kadib markii rasaas lagu furay shalay galab.
Falkan ayaa ka dhacay xarun tababar oo ay leeyihiin ciidamada Cirka oo ku yaala Airpor-ka Caasimadda ee Kapul.
Ciidamada nabad ilaalinta ee ka howl gala dalka Afghanistan ISAF ayaa sheegay in qaar kamid ah ciidamadoodu ay ku dhinteen airpor-ka Kapul kadib markii Pilot ka tirsan Ciidamada cirka ee Afghanistan uu rasaas ku furay.
Afhayeen u hadlay wazaaradda gaashan dhigga Afghanistan oo lagu magacaabo General Maxamed Zahir Caadimi ayaa sheegay in falkan lagu geytay qalab ay isticmaalayeen ciidamada Cirka ee Afghanistan oo ku sugnaa Airpor-ka Kapul.
Ciidamada Ajaanibta ah ee ku sugan Afghanistan aya weeraro kala kulma ciidamada Afghanistan haddii ay noqon laheyd qaar kamid ah ciidamada oo ka carooda falalka ay ku kacayaan ama maleeshiyad soo xirta daress-ka Ciidanka.
Dhibka ugu weyn ee hortaala ciidamada ISAF ee ka howl gala Afghanistan ayaa ah dhibaatooyinka ay kala kulmayaan Ciidamada dowladda ee ay tababarka u fudinayaan iyadoo ay usii dheertahay dhibaatooyinka kale ee ay kala kulmaan ururka Dhaliban.
Qaar ka tirsan dowladaha reer galbeedka oo ku guul dareystay in bayaan laga soo saaro xaaladda Siria.
Qaar kamid ah dowladaha reer galbeedka oo dadaalo ugu jiray in bayaan laga soo saaro xaaladda dalka Siria ayaa ku guul dareystay kadib markii China-ha iyo Ruushku ay diideen hadalka ay u bandhigeen golaha ammaanka ee Q.M.
Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa kasoo xigatay diblomaasi ka tirsan golaha ammaanka oo sheegay in aanan laga soo saarin kulan wax bayaan ah oo ku saabsan go’aanka ay soo bandhigeen islamarkaana u ololeynayeen dowladaha Ingriiska, Faransiiska, Jarmalka iyo Portaqiiska ee ku aadaana in bayaan ama go’aan laga soo saaro sida xun ee loola dhaqmayo dibad baxayaasha reer Siria.
Reuters ayaa sidoo kale ku sheegtay sababta aanan loo soo saarin bayaan rasmi ah in ay tahay China-ha iyo ruushka oo ka hor yimid misana leh awood qayaxan ee loo yaqaano VITO-ga.
Safiirka Ruushka u fadhiya Q.M Alexandro Bankin ayaa ka digay faragelin aanan loo baahneyn in lagu sameeyo dalka Siria, waxa uuna tilmaamay in sida ciidamada ammaanka ee Siria ay ula dhaqmayaan dibad baxayaashu ay tahay mid aanan gilgili karin nabadda gobolka.
Dhanka kale Golaha xuquuqul insaanka ee ka tirtsan Q.M ayaa ku dhawaaqay in ay berri yeelanayaan kulan deg deg ah oo looga arrinsanayo xaladda siria ee ku aadan dhanka xuquuda aadanaha ah oo ay soo bandhigtay dowladda Mareykanka.
waxaana ogolaaday kulankaas 16 dowlad oo ka mid ah 47-da dowlad ee ka tirsan golaha ammaanka ee Q.M balse taasi macneheedu ma ahan in usuan qabsoomi doonin kulanka madaama 3 dex meelood hal meel uu ku qabsoomi karo kulankaas sharci ahaan go’aan walbana laga soo saari karo.
Dowladda Siria-ya waxa ay hareereysay magaaladsa Darca oo ay ka socdaan dibad baxyo tan iyo bishii hore iyadoo ila iyo imika ay ku dhinteen in kabadan 450 qof, cunno yari oo ay wehliso dawo la’aan iyo biyo la’aan ayaana laga soo sheegayaa magaaladaas.
200 oo katirsan Xizbul Bacthi-ga xukuma dalkaas ayaan is cazilay iyagoo kasoo horjeeday ciidamada ay xukuumaddu dhoobtay magaalada Darca.
Mareykanka oo soo dhaweeyay heshiiska nabadda ee ay gaareen Dhaqdhaqaaqa Xamas iyo Ururka Fatx ee Falastiin.
Dowladda Mareykanka ayaa soo dhaweysay heshiiskii nabadda ee ay shalay magaalada Qahira kuwada gaareen Dhaqdhaqaaqa Xamas iyo Ururka Fatax ee Falastiin oo dhawaanahanba is khilafsanaa basle waxa ay ugu baaqday Xamas in ay joojiso rabshadaha.
Afhayeenka Golaha ammaanka qaranka ee Mareykan-ka Tomy Feitur ayaa sheegay in Mareykanku uu taageerayo wadahadal kasta oo u dhexeeya Falastiiniyiinta oo nabad lagu raadinayo , laakiin wuxuu intaasi ku daray in Xamas ay noqdeen argagixiso oo ay bartilmaameedsanayaan shacabka.
Afhayeenka ayaa intaasi ku daray in dowlad kastaa oo u dhalata Falastiin laag doonayo in ay klain ka qaadato dhisidda nabadda , in ay aqbasho go’aanada guddiga afargeesoodka ahaa ee ku saabsana Falastiin, in ay ka hortimaado argagixiso , in ay dhowrto heshiisyadii hore iyo waliba in ay aqiinsato jiritaanka Isra’el.
Ku xigeenka Xafiiska Siyaasadda dhaqdhaqaaqa xamas MusaAbu Marzuq ayaa sheegay in heshiiska ay shalay wada gaareen iyaga iyo Fatax ay saxiixayaan arbacada soo socoto kadibna ay bilaaban doonto dhaqan gelinta waxa lagu heshiiyay.
Bayaan kasoo baxay dalka Masar oo dhex dhexaadineysa labada dhinac ayaa lagu sheegay in ay isla afgarteen Xamas iyo fatax in ay dhisaan xukuumad KMG ah kadibna ay qabtaan doorasho.
Maxamuud Azahir oo kamid ah hogaamiyayaasha Xamas ayaa sheegay in ayFatax lagaareen heshiis ku saabsan in la dhiso xukuumid midno qaran ah, in doorasho la qabto 6 bil gudeheed ah, in la hagaajiyo ururka Xoreynta Falastiin iyo in ciidamo nabad ilaalin ah loo diro daanta galbeed iyo marinka Qaza.
jawaabtii ugu horeysay oo ka timid heshiiska labada dhinac ayaa Ra’izul wazaraaha Isra’el Binyamin Natanyaho waxa uu sheegay in xukuumadda Falastiin ee Fatax laga doonayo in ay kala doortaan heshiis ay la galaan Xamas ama mid ay lagalaan Isra’el oo aanay macquul aheyn in labada dhinac ay la heshiiyaan.
Natanyaho ayaa tilmaamay in Madaxda Fatax ay u muuqdaan kuwa itaal daranaaday, wuxuu intaasi raaciyay in ay u wanaagsan tahay in ay doortaan wadada saxda ah oo ah heshiis ay lagaaraan Isra’el halka ay kaal heshiin lahaayeen Xamas.
Duufaano ku dhuftay Mareykanka oo ay dad badan ku dhinteen.
Duufaano xogan oo ku dhuftay qeybo kamid ah Mareykanka ayaa waxaa ugu dhintay tira aanan ka yareyn 70 qof sida laga helay Mas’uuliyiinta laamaha degdegga kadib markii ay shalay tiro cusub ku dhinteen dabeylaha.
Magaalada Albaba ee koonfurta Mareykanka oo kaliya ayaa waxaa ku dhintay 45 qof waana meesha ugu daran ee ay ku dhufteen duufaanada ay wehliyaan roobab laxaad leh.
Madaxweynaha Mareykanka Barck Obama ayaa shalay amar ku bixiyay in la qado tallaabo dhaqso ah oo lagu badbaadinayo gobolada koonfurta iyo Bartamaha bariga.
Magaalooyinka Albama, Arkansas Kentucky, iyo Mississippi ayaa lagu soo rogay xaalad degdeg ah, Madaxda goboladan ayaa waxey ka dalbadeen ciidamada ilaalada qaranka in ay ka qeyb galaan dadaalada lagu badbaadinayo shacabka.
Hey’ad ku xeel dheer arrimaha jawiga ayaa xalay ugu digtay gobolada Koonfurta iyo bartamaha in laga yaabo in ay dhacaan duufaano iyo daadad sababa khasaarooyin hor leh.
Duufaanada iyo roobabka laxaadka leh ee ku dhuftay qeybo kamid ah Mareykanka ayaa waxey dumiyeen guryo aad u tira badan fiilooyinka Korontadana dhulka ayay kusoo daadeen taasoo sababtay in ay go’do korontada.
Mas’uuliyiinta Mareykanka ayaa sheegay in ay daraaseenayaan suurta galnimada in ay sameeyaan biyo xireeno ay ku dhimaan heerka biyaha wabiga ee sare u kacay ee sababay in ay xiraan Bridges-ka ama boondooyinka.